နာတာရှည် လေပြွန်ကျဉ်းရောဂါ (COPD) - Page 12 of 17 - Hello Sayarwon
နာတာရှည် လေပြွန်ကျဉ်းရောဂါ (COPD)
Dr. Thant Zin မှ ရေးသားသည်။5နာရီ အကြာက တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
နာတာရှည် လေပြွန်ကျဉ်းရောဂါ (Chronic obstructive pulmonary diseases) ဆိုတာ လေပြွန်ကို ကျဉ်းစေပြီး အဆုတ်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတချို့ကို ထိခိုက်စေတဲ့ ရောဂါအုပ်စုပဲ ဖြစ်တယ်။ ဒီရောဂါရှိတဲ့ လူနာများဟာ အသက်ရှူရခက်ပြီး မကြာခဏချောင်းဆိုးတတ်ပါတယ်။ အဓိကရောဂါ၂မျိုး ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် COPDရှိသူဟာ အဲဒီပြဿနာ၂မျိုးလုံး ရှိတတ်ကြပါတယ်။
နာတာရှည် လေပြွန်ရောင်ခြင်း – အဆုတ်လေပြွန် နံရံတလျှောက်ရောင်ရမ်းခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အဆုတ်လေအိတ်များပျက်စီးခြင်း – အဆုတ်လေအိတ်တွေဟာ တဖြည်းဖြည်းပျက်စီးလာတတ်ပြီး အသက်ရှူရခက်ခဲစေပါတယ်။
နာတာရှည် လေပြွန်ကျဉ်းရောဂါကို ဘာတွေကဖြစ်စေတာလဲ
အဓိကက အဆုတ်ကို ထိခိုက်စေမယ့် အရာတွေကို ပုံမှန်ရှူသွင်းနေရာက ကြာလာတဲ့အခါ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အောက်ပါအချက်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။
ဆေးလိပ်ငွေ့များ (တဆင့်ခံဆေးလိပ်ငွေ့များ အပါအဝင်)
အိမ်တွင်း လေထုညစ်ညမ်းခြင်း (ညှော်နံ့များ)
လုပ်ငန်းခွင်မှ အမှုန်များ၊ ဓာတုငွေ့များ
ကလေးဘဝတွင် အသက်ရှူလမ်းကြောင်း မကြာခဏ ပိုးဝင်ခြင်း
နာတာရှည် လေပြွန်ကျဉ်းရောဂါရဲ့လက္ခဏာတွေက ဘာတွေလဲ
အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပြသနာဖြစ်တာကြောင့် အသက်ရှူရာမှာ မကြာခဏ အခက်အခဲဖြစ်စေပါတယ်။ အောက်ပါလက္ခဏာတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
အဖြူရောင်၊ အဝါရောင်ရင့်ရင့် (သို့) အစိမ်းရောင် သလိပ်များထွက်ပြီး ချောင်းဆိုးခြင်း (တစ်ခါတရံ သွေးမျှင်လေးတွေပါ ပါတတ်ပါတယ်)
အသက်ရှူလမ်းကြောင်း မကြာခဏ ပိုးဝင်ခြင်း
အသက်ရှူရခက်ခြင်း (အထူးသဖြင့် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားချိန်)
နာတာရှည် လေပြွန်ကျဉ်းရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေကို ဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
နာတာရှည် လေပြွန်ကျဉ်းရောဂါ ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ဆရာဝန်ဟာ သင့်ကို ဆေးလိပ်ငွေ့တွေ၊ အဆုတ်ကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့အရာတွေနဲ့ ထိတွေ့မှုရှိလား မေးပါလိမ့်မယ်။ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ အသက်ရှူသံတွေ ရှိမရှိ နားကြပ်နဲ့ နားထောင်ပါလိမ့်မယ်။
အဆုတ်လုပ်ငန်းစစ်ဆေးခြင်း – လေဘယ်လောက် ရှူသွင်းနိုင်သလဲ၊ ဘယ်လောက်မြန်မြန်ရှူနိုင်လဲ၊ သွေးထဲကို အောက်ဆီဂျင်ဘယ်လောက် ရောက်သလဲ စတဲ့အချက်တွေ စစ်ဆေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
လေမှုတ်ကိရိယာဖြင့်စစ်ဆေးခြင်း – အသက်ပြင်းပြင်းရှူပြီး ဘယ်လောက်ထိ ပြန်မှုတ်ထုတ်နိုင်လဲ တိုင်းတာတဲ့ ကိရိယာဖြစ်ပါတယ်။
ရင်ဘတ်ဓာတ်မှန် (သို့) စီတီရိုက်ခြင်း – ရင်ဘတ်ထဲက အဆုတ်၊ နှလုံး ပုံရိပ်တွေအပြင် COPD ရဲ့ လက္ခဏာတွေပါ တွေ့နိုင်ပါတယ်။
သွေးလွှတ်ကြောတွင်းမှာ ဓာတ်ငွေ့ စစ်ဆေးခြင်း – အောက်ဆီဂျင်ပါဝင်မှုကို စစ်ဆေးပါတယ်။
နာတာရှည် လေပြွန်ကျဉ်းရောဂါ ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
COPD ကို ပျောက်ကင်းအောင် ကုသနိုင်ခြင်း မရှိပေမယ့် သက်သာအောင်တော့ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကုသခြင်းရဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေကတော့
နောက်ဆက်တွဲပြသနာများ ကာကွယ်ကုသနိုင်ရန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လေပြွန်ကျယ်စေသောဆေးများ – အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကို ကျယ်စေပြီး အသက်ရှူရပိုမိုလွယ်ကူစေဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
လေပြွန်ကျယ်စေသော ဆေးများနဲ့ ကော်တီကိုစတီးရွိုက်ဆေးများ ပေါင်းစပ်ပေးခြင်း
အဆုတ်ရောင်ရောဂါဖြစ်စေသော ဘက်တီးရီးယား ကူးစက်မှု ကာကွယ်ဆေး
ဆေးဝါးကုသမှုများနဲ့ မသက်သာရင် ခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်ပါတယ်။ ဆိုးရွားတဲ့ အခြေအနေမှာ အဆုတ်လဲလှယ် အစားထိုးခြင်း ပြုလုပ်ပါတယ်။ အဆုတ်ကို အပိုင်းလိုက်ဖယ်ထုတ်ခြင်း၊ အဆုတ်ပမာဏလျှော့ချရန် ခွဲစိတ်ခြင်း၊ အဆုတ်အစားထိုးခြင်း စတဲ့နည်းလမ်းတွေ ရှိပါတယ်။
ရေရှည်မှာ ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့ သက်သာအောင် နေရမလဲ
COPDမှာ နာတာရှည်ရောဂါဖြစ်တဲ့အတွက် ရေရှည်မှာ ရောဂါပိုမဆိုးလာအောင် ဂရုစိုက်နေထိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။
ဆေးလိပ်အပါအဝင် အဆုတ်ကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေမည့် အရာများကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်း
လက်ရှိမှာ ဆေးလိပ်သောက်နေရင် ဖြတ်သင့်ပါတယ်။ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းဟာ COPDရဲ့ အဓိက အကြောင်းအရင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်မှာ အောက်ဆီဂျင်အိုးနဲ့ ရှူနေရတဲ့သူဆို မဖြစ်မနေ ဖြတ်ရပါမယ်။ မီးလောင်လွယ်စေလို့ပါ။
ဒါ့ပြင် တခြားသူသောက်တဲ့ ဆေးလိပ်ငွေ့ကိုရှူမိခြင်း၊ လေထုညစ်ညမ်းခြင်း၊ ဓာတုငွေ့များ၊ အမှုန့များ စတာတွေကို ရှူရှိုက်ခြင်း ရှောင်ကြဉ်ရပါမယ်။ အိမ်မှာရှိရင်လည်း ရှင်းလင်းထားသင့်ပါတယ်။
ဆရာဝန်ညွှန်တဲ့ ဆေးတွေ၊ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်အချက်တွေကို လိုက်နာရပါမယ်။ ရက်ချိန်းမှန်မှန်ပြရပါမယ်။
COPDလူနာတွေဟာ အဆုတ်ထိခိုက်ထားတဲ့အတွက် သူများထက် ပိုးဝင်လွယ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ခံအားကောင်းစေဖို့
-ကယ်လိုရီနဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေ လုံလောက်စွာပါတဲ့ စားသောက်မှုပုံစံကို စားသုံးရပါမယ်။
-တက်ကြွစွာနေထိုင်ပြီး လေ့ကျင့်ခန်း ပုံမှန် လုပ်သင့်ပါတယ်။
-ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုတွေဟာ အသက်ရှူတဲ့ ကြွက်သားတွေကို အားကောင်းစေပါတယ်။
-ချက်ပြုတ်၊ သန့်ရှင်းရေး စတဲ့အိမ်မှုကိစ္စနေတွေကို သက်သောင့်သက်သာ လုပ်ကိုင်ပါ။ ပစ္စည်းတွေ ရွှေ့စရာရှိရင် အကူအညီရှာပါ။
-သက်သာချောင်ချိပြီး ဝတ်ဆင်ရလွယ်ကူတဲ့ အဝတ်အစား ဖိနပ်တွေ ဝတ်ဆင်ပါ။
-ရောဂါပြင်းထန်မှု အခြေအနေတွေပေါ် မူတည်ပြီး မိမိအလုပ်တွေကို ကူညီနိုင်ဖို့ မိသားစုများ၊ မိတ်ဆွေများဆီမှာ အကူအညီတောင်းပါ။
COPD http://familydoctor.org/familydoctor/en/diseases-conditions/chronic-obstructive-pulmonary-disease.printerview.all.html. Accessed August 12, 2016.
COPD http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs315/en/. Accessed August 12, 2016.
COPD http://www.cdc.gov/copd/index.html. Accessed August 12, 2016.
နာတာရှည် လေပြွန်ကျဉ်းရောဂါ (COPD) ရဲ့ ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်များ
နာတာရှည်အဆုတ်ရောဂါ (COPD) လူနာများအတွက် ဆေးငွေ့ရှူစက် (nebulizer) အသုံးပြုနည်း
နာတာရှည် လေပြွန်ကျဉ်းရောဂါ (COPD) ရဲ့ လက္ခဏာနှင့် အဆင့်များ
ဆေးလိပ် ငွေ့ ရှူနေရတဲ့ ကိုယ့်ဘေးကလူတွေ ဘာထိခိုက်လာမလဲ